Izimbali zaseBrazil zisengozini yokuqothulwa | Ukuhamba kwe-Absolut
Daniel | 15/04/2021 12:23 | Kubuyekezwe ku- 15/04/2021 13:23 | Brasil
Brasil Kwenzeka ukuthi kube yizwe eliluhlaza kunayo yonke eNingizimu Melika, izwe lezikhala ezinkulu zemvelo nokuhlukahluka okumangalisayo kwezinhlobonhlobo. Kodwa-ke, lo mcebo omkhulu usongelwa kanzima, ikakhulukazi Izimbali zaseBrazil.
Ucwaningo olwenziwa eminyakeni ethile ezweni laseNingizimu Melika lalinganisela inani lezinhlobo zezitshalo ezisengozini engu-2.118. Hhayi lokho kuphela: futhi, ngokusho kwesazi esidumile saseBrazil UGustavo Martinelli, umxhumanisi we Incwadi Ebomvu Yezimbali ZaseBrazil (2013), i- izinga lokuqothulwa yezinhlobo zezinto eziphilayo zishesha kakhulu kunalokho obekucatshangwa eminyakeni embalwa edlule.
UMartinelli ubelokhu enza umsebenzi we-titanic wokufaka ikhathalogu nokuhlukanisa ingcebo yemifino yaseBrazil. Imizamo yabo iphinde iqondiswe ekuqwashiseni umphakathi neziphathimandla ngokubaluleka kwengxoxo mayelana nalo mcebo.
Izinhlobo eziningi zezimbali zaseBrazil zifakiwe ku- Uhlu Olubomvu lwe-International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kodwa-ke, ngenxa yocwaningo olusha, uhlu lwangempela lubanzi kakhulu.
Ochwepheshe balinganisela ukuthi emahlathini aseBrazil basacashile izinhlobo eziningi ezingakatholakali. Lezi zinhlobo zingaba phakathi kuka-10% no-20% wezimbali zangempela zaseBrazil. Kuyathakazelisa ukuthi izinga lokuhlonza izinhlobo ezintsha lihamba kancane kunezinga lokunyamalala kwezinhlobo ezaziwayo.
I-Las izizathu zalokhu kushabalala okukhulu aziwa kahle. Zingafingqwa kathathu:
Ukugawulwa ngokungakhethi ngezinjongo zezolimo.
Ukuqedwa kwamahlathi okuxhumene nokwakhiwa kwezindawo ezintsha emadolobheni.
1 Izinhlobo zezitshalo ezisengozini eBrazil
1.1 I-Andrequicé (Aulonemia effusa)
1.2 I-Xhumana (i-Syngonanthus contact)
1.3 I-Jacaranda da Baia (Dalbergia nigra)
1.4 I-Marmelinho (Brosimum glaziovii)
1.5 I-Paininha (i-Trigonia bahiensis)
1.6 I-Palmito-juçara (Euterpe edulis)
1.7 I-Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia)
1.8 UDragâo Sangue (Helosis cayennensis)
1.9 I-Velame preto (Camarea hirsuta)
1.10 I-Veludo (Duguetia glabriscula)
2 Londoloza izimbali zaseBrazil
Izinhlobo zezitshalo ezisengozini eBrazil
Izinhlobo ezisongelwayo zezimbali zaseBrazil zihlukaniswa njenge amaqembu amane ngokwezinga lokusongela. Lokhu kuhlukaniswa kwenziwe ngokususelwa kunqubo yezinga lokwehla, ubukhulu besibalo sabantu, indawo yokwabiwa kwendawo kanye nezinga lokwehlukaniswa kwabantu.
Lolu uhlu olufushane lwezinhlobo eziyizifanekiselo ezisongelwa ukuqothulwa:
U-Andrequicé (I-Aulonemia effusa)
Eyaziwa nangamanye amagama afana ne- lindokuhle, aveia do kuvaliwe o samambaia indiana. Kuyisitshalo esinokubukeka okufana nophande okwakumila ngokwesiko ezifundeni ezisogwini lwaseBrazil. Namuhla usengozini enkulu.
I-Brasilian (Syngonanthus uxhumane)
Olunye uhlobo olusengozini yokuqothuka eBrazil yilona olunikeza leli lizwe igama lalo. Izinkuni zayo zazisetshenziswa ngabahlali basePutukezi ekwakheni imibala yembala nokwenza izinsimbi ezithile zomculo.
Amagatsha aseJacaranda avela eBaia
UJacaranda da Baia (I-Dalbergia nigra)
Isihlahla esikhulayo sezimbali zaseBrazil izinkuni zazo ezaziswa kakhulu. Ukugawulwa kwemithi ngokungakhethi kunciphise inani lama-specimens cishe cishe.
UMarmelinho (I-Brosimum glaziovii)
Isitshalo se-Shrubby esikhiqiza amajikijolo anezinto eziningi ezuzisayo zezempilo. Lesi sitshalo, esomndeni ofanayo nezihlahla zikamalibhele, sisengozini enkulu yokunyamalala eBrazil.
I-paininha enezimbali zayo ezibomvu nephuzi. Uhlobo olusengozini yokuqothulwa.
I-Paininha (I-Trigonia bahiensis)
Tshala ngezimbali ezinhle ezibomvu neziphuzi ukutholakala kwazo ezifundeni ezisogwini kuncishiswe kakhulu eminyakeni yamuva.
I-Palmito-juçara (Euterpe edulis)
Izinhlobo ezingaphansi kwesundu esifushane nesiqu esincane esikhula kwezinye izingxenye zaseningizimu yezwe. Izihlahla ezinkulu zesundu zakudala zilinganiselwe namuhla ebufakazini bobufakazi.
I-Pinheriro do Paraná noma i-Araucária: uphayini "waseBrazil" osengozini yokunyamalala.
I-Pinheiro do Paraná (I-Araucaria angustifolia)
Izinhlobo zezihlahla zomndeni we Auraucariaceae kufakwe kuhlu njengezimbali ezisengozini. Lo phayini waseBrazil, obizwa nangokuthi ukwazi, ingafinyelela kumamitha angama-35 ukuphakama. Ekuqaleni yayinweba ngesimo sezixuku ezinkulu ezinamahlathi eningizimu yezwe. Ukubuyela emuva kwayo emashumini eminyaka amuva nje kube kakhulu.
I-Sangue de Dragâo (Helosis cayennensis)
Isihlahla esivela esifundeni sase-Amazon osisi saso esibomvu, esifana negazi, sisetshenziselwa ukwenza imikhiqizo eminingi yezempilo nobuhle.
I-Velame preto (ICamarea hirsuta)
Isitshalo esidumile "somucu omnyama", esake saba sikhulu kakhulu, sesivele sanyamalala ezweni.
Uboya, isitshalo esisengozini yokuqothulwa
I-Veludo (I-Duguetia glabriscula)
Isitshalo esinezimbali ezibomvana esici saso esivelele kakhulu isiqu saso namaqabunga "anoboya". Eminyakeni eyikhulu edlule yasatshalaliswa cishe kulo lonke izwe, namuhla isinda ezindaweni ezithile ezivikelekile.
Londoloza izimbali zaseBrazil
Kulungile ukusho ukuthi kunezinhlelo ezibalulekile ezenziwayo ukonga izimbali zaseBrazil. IBrazil isayinile isivumelwano se- Isivumelwano Sokwehluka Kwezinto Eziphilayo kanye Nezinjongo ze-Aichi (2011), ukuzibophezela okukhulu emhlabeni wonke ukuvimbela ukuphela kwezinhlobo ezisengozini.
Phakathi kwezinye izindlela eziningi, uhulumeni wesifundazwe washicilela eminyakeni embalwa eyedlule a izindawo eziseqhulwini imephu, eziningi zazo esezitholile ifayili le- isimo sokuvikelwa esikhethekile. Futhi hhayi kuphela ukusindisa izimbali, kepha nezilwane zezwe.
Kuzo zonke lezi zinhlelo zokongiwa kwemvelo, ubuchwepheshe ibamba iqhaza elibalulekile. Ngenxa yakho, kungenzeka ukonga imbewu yezitshalo ezisongelwayo ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo ezindaweni ezitholakele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izimbali zaseBrazil zisengozini yokuqothulwa
KUBONAKALA KIMI UKUTHI ABANGANIKI LOLWAZI
KUNGANI BANGOMUNYE UM
SHIT NO LAPUTA
ICuba kanye nemvelaphi yegama layo
I-khekhe laseDashi kanye ne-confectionery